Gudoomiyaha Xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Oo Soo Saaray Warsaxaafeed | Salaan Media
Gudoomiyaha Xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Oo Soo Saaray Warsaxaafeed
Hargeysa (SM) Guddoomiyaha Urur siyaasadeedkii Xaq-soor ee dhawaan Heshiiska la galay Xukuumadda ayaa sheegay in heshiiska hordhaca ah ee aan la cadayn qoddobadiisu ku keentay su’aalo badan oo aan jawaab loo hayn.
Xasan Ciise waxa uu War-saxaafadeed uu soo saaray kaga waramayaa in heshiisku wali qabyo yahay oo waji kale oo fasiraad dheeraad ah bixinayaa u socdo.
Wadahadaladii ka dhaxeeyay ururka xaqsoor iyo xukuumada Somaliland qaybtiisii hore waxay ku dhamaatay afar qodob oo guud oo ay isku raaceen gudigii laba geesoodka ahaa. Gudigaasi mudo sadex bilood ah ayuu muujiyey dadaal badan waanay ku mahadsan yihiin.
Waxa markaas hadhsan in qaybta labaad ee wadahadalada loogu talo galo in tafaasiishii loo galo. Marka marxaladaas labaad la gabgabeeyo ayaa dadka loo sheegi karaa tafaasiisha qodobada lagu heshiiyo. Imika waa la heshiiyeyna waa la yidhi dadkiina looma sheegin waxa lagu heshiiyey waxa uu yahay. Sababta oo ah waxa aan la gaadhin oon imika la ahayn tafaasiishii qodobada ay tahay in lagu heshiiyey. Arintani waxay dhalisay su’aalo ka badan inta ay ka jawaabtay. Waxa aan xasuusinayaa taageerayaasha xaqsoor iyo shicibka Somaliland in Xaqsoor aan cidina uga lexojeclo badnayn wanaaga dalka Somaliland iyo midnimada dadweynaha reer Somaliland. Xaqsoor si daacad ah ayuu u galay wadahaladan,waxaanu diyaar u yahay inuu ku dhamaystiro si cadaalad ah oo xaqsooraysan ooy ku jirto danta iyo wanaaga wadankeenan qaaliga ah ee Somaliland. Waa hadii laga helo dhinaca kale ee xukuumada maanta xilka iyo amaanadu saaran tahay.